Lafta-Gareen Oo Sheegay In La Xalinayo Tabashooyinka Musharaxiinta. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Lafta-Gareen Oo Sheegay In La Xalinayo Tabashooyinka Musharaxiinta.
Lafta-Gareen Oo Sheegay In La Xalinayo Tabashooyinka Musharaxiinta.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa ka hadlay arrimaha doorashada dalka ka dhacaya, xili weli uu muran xoogan uu ka taagan yahay Guddiga la magacaabay ee doorashada.
Madaxweyne Lafta-gareen ayaa waxaa uu sheegay in maamulkiisa uusan wax cabasho ah xiligaan ka qabin doorashada dalka ka dhaceysa 2020/21, ayna doonayaan in doorashada ku dhacdo waqtigii loogu tala-galay, diyaarna u yihiin qabashadeeda.
Waxaa uu sheegay Madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ka qeyb qaadan doono sidii loo xalin lahaa tabashooyinka Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha ay ka qabaan doorashada iyo Guddiyada la magacaabay.
“Waxaa rabnaa inaan mas’uuliyad gooni iska saarno dhawaaqa iyo walaacii dadkii siyaasiyiinta ee xamar joogay ee cabashada ka qabay dorashooyinka una baahan in la isku qanciyo oo la wada hadlo, waa tii aan horay u balanqaadnay waa u istaageynaa, wax nagu muhiimsan oo rabno waxay tahay sidii horay u ahaan jirtay inay dooarasho dhacdo, si nabad ku dhacdo,” ayuu yiri Madaxweyne Lafta-gareen.
Isaga oo sii hadlaayay Lafta-gareen ayuu Madaxda dowladda Federaalka iyo maamul Goboleedyada ugu baaqay in la fuliyo heshiiskii Magaalada Muqdisho lagu gaaray 17-kii bishii November 2020, si ay doorashada ugu dhacdo waqtigii loogu tala-galay.
Muran xoogan ayaa ka taagan doorashada gaar ahaan Guddiyada la magacaabay oo ay kasoo horjeedan Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana sidoo kalena diidan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo shuruudo ku xiray magacaabista Guddiyada.
Maqaal horewasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha KGS oo ka qeybgaley xaflad si rasmi ah loogu furayey Tartanka kubada cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir,
Maqaal XigaMursal Oo Hambalyo U Diray Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed,